Trailer yaNetflix ya'Pakati pehusiku 'Inoburitsa Kutya paGungwa Remahombekombe - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Ngarava yeNetflix 'Midnight Mass' Inoburitsa Kutya paGungwa reGungwa
Ngarava yeNetflix 'Midnight Mass' Inoburitsa Kutya paGungwa reGungwa
by Trey Hilburn III September 8, 2021 20,892 maonero
Iyo tirera yeMike Flanagan anotevera Netflix kupa inotevera Kuputika kweGomo reimba uye TKubata kweBly Manor ari pakupedzisira pano! Pakati pehusiku Misa inotaridzika kuva doozy futi. Ichokwadi iine Stephen King Zvinodiwa Zvinhu vibes inosaswa munzvimbo dzese mukaravhani. Ndiri fan hombe yemaguta ari ega egungwa akavakirwa mafirimu, zvinhu zvakawanda zvinogona kuenda zvisirizvo zvakatemwa kubva kubudiriro. Turera haina kutidzikisa, yakangotipa zvakavanzika zvakakwana uye nyama kuti tirambe tine nzara yezvakawanda. Neraki, hatifanirwe kumirira kwenguva refu. Pakati pehusiku Misa inogara paNetflix gare gare mwedzi uno.
Mutsara we Pakati pehusiku Misa inoenda seizvi:
Iyo ngano yediki diki, yakasarudzika nharaunda yechitsuwa ine zvikamu zviripo zvakawedzeredzwa nekudzoka kwejaya rakanyadziswa (Zach Gilford) uye kusvika kwemupristi anokwezva (Hamish Linklater). Kana kutaridzika kwaBaba Paul paCrockett Island kuchipindirana nezviitiko zvisina tsananguro uye zvinoita kunge zvinoshamisa, kushingairira patsva kwechitendero kunotora nharaunda - asi zvishamiso izvi zvinouya nemutengo?
Pakati pehusiku Misa Nyeredzi Kate Siegel, Henry Thomas, Annabeth Gish, Robert Longstreet, Alex Essoe, Michael Trucco, Samantha Sloyan, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Igby Rigney, naAnnarah Cymone.
Uri kufara kuona Pakati pehusiku Misa? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Pakati pehusiku Misa inofanirwa kubuda paNetflix kutanga Nyamavhuvhu 24.